Singobani - iSichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
NGUBANI WEIYU Ugesi?
I-Weiyu Electric, iyinkampani ephethwe ngokuphelele yenkampani esohlwini (iStock Code: 300820) -Sichuan Injet Electric Co., Ltd. Enabasebenzi Abangaphezu Kwama-500, i-workshop engama-22000 ㎡ engeyona uthuli, izitifiketi ze-patent eziyi-169, isipiliyoni seminyaka engama-24 kugesi imboni yamandla, i-Injet ithole ukunconywa okuphezulu kumabhizinisi odumile aphesheya ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo efana ne-ABB, Siemens, Schneider, GE, GT, SGG njll.
Siyazifela ngendalo nenselelo, sizinikele ukugcwalisa isithembiso sethu kumakhasimende ngamunye kuwo wonke amaphrojekthi. Siqinisa ukubambisana neyunivesithi kanye nocwaningo, futhi sizinikele ekuthuthukiseni isipiliyoni samakhasimende kanye nobuchwepheshe obusha. Akukho okungasivimba ukwenza indalo ibe lula futhi isebenze kalula.
Isungulwe ngo-2016, i-WEIYU ingumkhiqizo we- "EVSE" (Electric Vehicle Supply Equipment) waseSichuan Weiyu Electric Co., Ltd. ozinikele emisha, ikhwalithi, nokwethembeka emkhakheni wezimboni zamandla. Ngomzamo oqhubekayo we-R & D yobuchwepheshe kanye neTeam & Service Team, u-Weiyu Electric usevele uyakwazi ukukhiqiza zonke izinhlobo zeziteshi zokushaja ze-EV nokunikeza amaklayenti isisombululo esiphelele sokushaja. I-OEM ne-ODM noma usizo lohlelo lokusebenza lobunjiniyela luyatholakala.
Ngesikhathi sokukhiqiza nokukhiqiza nsuku zonke, yonke inqubo ihambisana nohlelo lwe-ISO 9001 Quality Assurance System.
Izingxenye zethu eziyinhloko zenziwa enkampanini yethu yomama -Injet Electric, ene-22000 ㎡ indawo yokusebenzela engathuli, Zonke izinqubo zisezingeni eliphakeme kakhulu ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Izinto ezisebenza ngogesi zizogcinwa endaweni yokugcina izinto enomswakama njalo. Lonke ibhodi lesifunda lizopendwa ukuze lingabonakalisi umswakama, i-anti-dust, i-salt-pray-proof, ne-anti-static.
Ingxenye yesoftware iqukethe ibhodi lesifunda, uhlelo lokulawula kanye nesilawuli. Lezi zingxenye ezintathu zinezinqubo zazo ezihlukile zokukhiqiza, okufanele zilandelwe ukuqinisekisa ukuhambisana okugcwele nezidingo zokwakhiwa.
Yonke isoftware ne-hardware kungalandelelwa futhi kulandelwe ngenombolo ye-serial, usuku lokulethwa, irekhodi lokuhlola, irekhodi lokufunwa kwezinto ezibonakalayo, irekhodi lokuhlolwa kwempahla eluhlaza kanye nerekhodi lokuthengwa kwempahla eluhlaza. Konke esikwenzayo ukuqinisekisa ikhwalithi yokwanelisa izidingo zamakhasimende ethu.
Ezimele I-R & D.
Sine amaqembu we-R & D ochwepheshe anekhono elinamandla lokuthuthukisa. 51 amalungelo obunikazi wedizayini asevele asetshenzisiwe, futhi inombolo ikhula ngokuqhubekayo.
Ukushaja Iziteshi Ev, Amashaja ezimoto zikagesi, Isiteshi se-Ev Charge, Amashaja ezimoto zikagesi ane-Type 2 Plug, Iziteshi ze-Ev Charge, Isiteshi sokushaja i-Ev,